Muwaadinka iyo dhiiga Soomaaliyeed oo beec: FAALLO – Warfaafiye:
Muwaadinka iyo dhiiga Soomaaliyeed oo beec: FAALLO
Ali Mohyadin Sep 5, 2017 0
Dadka Soomaaliyeed waxay halis ugu jiraan in gacmaha caddowga ku danbeeyaan, labada dowladoodna Ehiopia iyo Somalia isku si uma arkaan waxa loo yaqaano argagixiso. Dowladdii Melez Zenawi ka dhintay ee hadda ka tallisa dalka Ethiopia waxay argagixiso u yaqaanaan qof kasta oo nidaamkeeda mucaarad ku ah, kacdoonka shacbiga Ethiopia iyo jabhadaha hubeysan intaba.
Laakiin dowladda iyo shacbiga Somalia si ka aragti duwan ayey u fasirtaan waxa loo yaqaan argagixiso. Argagixiso waxaa Somalia looga yaqaan burcad diimeedka sida Al-Shabaab, Al-qaacida, ISIS, Boko Haram iyo wixii la mid ah, arrintaasina waa fasiraad caalami ah oo dunida oo dhan laga aqoonsan yahay.
Itoobiya waxaa ka taliya nidaam kalitalisnimo ah iyo awood xukun maroorsi ah ee lid ku ah shacuubta iyo xarakooyinka wadaniga ah.
Itoobiya waxay ka kooban tahay ummado aan is rabin oo la isku kakabay oo hadda qarka u saaran inay kala daadaan, saas darteed, taliska xukunka haaya cid kasta oo ka mid ah xarakada shacuubta ee u halgameysa aaya katashigooda ayaa loogu yeeraa argagixiso, kuwaasoo aheyn burcad diimeedka.
Dowladda tabarta yar ee Somalia, waxaa hoggaamiya dad aan laheyn khibrad siyaasadeed iyo wadaniyad qoto dheer, waana dowlad ku dhisan qaab qabiil 4.5. Si kale hadaan u dhigno waa nidaam Melez Zenawi kasoo sameeyay Mbaghti ee lagu dhisay federaal qabiileysan oo aan xariir la laheyn dhuux iyo nuxurba danaha qarameeed ama midow Soomaaliyeed ee heshiis ku ah nidaam ka dhaxeeya.
Sidaas darteedl nidaamkaasi oo hadda isku rogay dowlad rasmi ah wuxuu halis ku yahay danaha shacbiga iyo hadafka qaranimada Soomaaliyeed.
Waxaa la gaaray dhaqdhaqaaqa ciidamada Itoobiya iyo Kenya ee huwan shaarka AMISOM inay carada Soomaaliyeed ka sameeyaan falal aan xadidneyn, lidna ku ah danaha ammaanka iyo wada jirka qaranka Soomaaliyeed.
Arrintaan waxaa ku kala qeybsan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka, shacbiga Soomaaliyeedna waxay dareen xun ka qaadeen iyagoo ka gilgilanaya in gacmaha Ethiopia lagu hubsado muwaadin Soomaaliyeed oo dalka Somalia ugu noolaa si nabad ah iyo amaan ah.
C/kariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax” wuxuu ka mid yahay madaxda ONLF ee u dhaqdhaqaaqa xorriyada iyo aayo ka tashiga dhulka Soomaali galbeed ee sida sharci darada ah Ingriiska ugu wareejiyay boqortooyadii hore ee Xabashida.
Nin Soomaaliyeed oo halgan wadani ah ku jira ee loo gacan geliyay dowladda EThiopia ayaa waxay noqotay naxdin iyo dadka Soomaaliyeed gees ka gees dalka gudahiisa iyo dibadiisaba ka fajaceen.
Weli Taariikhda Soomaaliya sooma marin dowlad dadkeeda u gacan gelisa dal kale. Xataa waxaa xaaraan ahaan laheyd qof kale oo asal aan kasoo jeedein qowmiyad Soomaaliyeed oo amaan ku haysta caro Soomaaliyeed in Ethiopia ama Kenya loo ganan géliyo mar hadduu wajahaayo ciqaab noocey rabto ha ahaatee.
Dowladda Somalia waxay meel ugu dhacday dastuurkeeda KMG ah, sharuucdeeda qaranimada iyo mida qaanuunka dowliga ah.
Waji gabaxa dowladda Soomaaliyeed waxay hareysay kalsoonida lagu qabi karo, arrintaasi dambiga ah haddii dowladda ku dhaqaaqday waxaa dhanka kale halis loogu jiraa in arrimihii badda ee hadda dacwada ka taal in dowladda Somalia ka sameyso tanaasul, yacni ay ku wareejiso qeyb ka mid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliyeed dalka Kenya.
Odayaal Soomaaliyeed oo xoogaa dufin afka loo mariyay, sharaf dhacna ah inay siyaasad iyo arrimo qarameed ka hadlaan iyagoo shaqadoodu tahay meyd tuug iyo soorya qaadasho ama arrimo kale oo dhaqanka la xiriiro inay noqdaan kuwo lagu horgudbiyo kacdoonkii shacbiga ay ka muujiyeen arrintaasi dareenka xun leh.
Baarlamaankii ayaa hadda mixno ka taagan tahay, lacagihii canshuurta dadka ee loogu talagalay badbaadinta miisaaniyada iyo horumarinta wadanka iyo mushaarooyinka shaqaalaha iyo ciidamada ayaa hadda waxaay dowladda u leexisay in lagu aamusiyo codka xubnaha baarlamaanka iyo saxaafadda madaxabannaan. iyadoo xildhibaanada baarlamaanka iyo suxufiyiinta madaxa-bannaan qaarkood haddii far dheeraata noqdaan in ay halis ugu jiraan in loo dhiibo Ethiopian-ka Baydhabo fadhiyo si la mid ah Qalbi Dhagax.
Waxaa dhimatay kalsoonidii dowladda lagu qabay, halkii laga oran jiray hal ku dhigii la baxay “Farmaajo ii geeya, waxay hadda isku badashay Ar Farmaajo iga qariya” haddii kale Amxaaraduu ii dhiibayaa.
Kheyraadka wadanka in si qaldan loogu isticmaalo borobagaando lagu difaacayo tallaabooyinka qaldan ee dowladda waxay keeni doontaa cawaaqib xumo soo wajahda maamulka maaliyada iyo qeybaha kale ee aasaaska u ah horumarinta wadanka.
Beesha caalamka sida IMF, World Bank, US-AID iyo ha’yaddaha kale ee DF ka kaalmeeya xagga horumarinta iyo maamul wanaaga waxay joojin doonaan deeqahooda.
Dhaqdhaqaaqyada hay’addaha Xuquuqda aadamiga, kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga intaba waxay fasiraad u la yihiin, ugubna ku ah wax ka sheegista dowlad dadkeeda u dhiibaysa dal kale.